Galaxy S10 Plus ထက် Huawei P30 Pro ကို ရွေးသည့်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ | Myanmar Mobile App
Home Trending Smartphone Galaxy S10 Plus ထက် Huawei P30 Pro ကို ရွေးသည့်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
Galaxy S10 Plus ထက် Huawei P30 Pro ကို ရွေးသည့်သင့်တဲ့အကြောင်းရင်းများ
Samsung ထက် Huawei ရဲ့ flagship လေးက ဘာကြောင့် ပိုကောင်းနေရသလဲ။
Galaxy S10 Plus ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လတွေမှာ ဖုန်းကိုင်ဆောင်သူတွေရဲ့အာရုံကို အတော်လေးဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဖမ်းစားရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း Huawei P30 Pro ရောက်ရှိလာချိန်မှာတော့ ဒါတွေအားလုံးကို လုယူသွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဖုန်းနှစ်ခုလုံးမှာ တူညီနေတဲ့ feature လေးတွေတော့ ရှိနေပါတယ်။ IP68 certification ၊ ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်၊ reversible charging ၊ Android Pie ၊ octa-core processor ၊ ကင်မရာစုစုပေါင်းငါးလုံး ၊ OLED screen အကွေးနဲ့ သတ္ထုဖရိန် စတာတွေ တူညီပါတယ်။
တူညီနေတာတွေရှိနေတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကတော့ ခြားနားပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့်တော့ Huawei P30 Pro က ပိုကောင်းပါတယ်။ P30 Pro ကို အပြည့်အ၀မစမ်းသပ်ရသေးဘူးဆိုပေမယ့်လည်း hands-on လုပ်ကြည့်ရသလောက်ကတော့ ဒီလိုပဲအဖြေထွက်ပါတယ်။
P30 Pro ဘာကြောင့်သာနေရသလဲ ကျွန်တော်တို့ ကြည့်လိုက်ရအောင်။
1. 5x optical zoom: လိုချင်သလောက်နီးပါး ရလာတယ်
Galaxy S10 Plus ဟာ Pixel3XL လိုပဲ ဈေးကွက်ထဲမှာ အကောင်းဆုံးကင်မရာဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ ကျောပြင်မှာ ကင်မရာသုံးလုံးနဲ့ အရှေ့မှာ နှစ်လုံးတပ်ဆင်ထားပါတယ်။ Huawei ကတော့ အနောက်ဘက်မှာ လေးလုံးတပ်ထားပြီးတော့ အရှေ့မှာတစ်လုံးပဲ ထည့်ပေးထားပါတယ်။
Galaxy S10 Plus ထက် သာလွန်နေတဲ့ Huawei P30 Pro ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ 8-megapixel ကင်မရာလေးကနေ 5x optical zoom ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Galaxy S10 Plus ဟာ 2x optical ပဲရပြီး Pixel3XL ကတော့ optical zoom feature ကို မပါတာပါ။
optical zoom ငါးဆဖြစ်တာမို့ အနီးကပ်ရိုက်ချက်တွေကို ရိုက်ကူးစေနိုင်သလို digital zoom ထက်လည်း ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုရစေပါတယ်။ digital zoomဆိုရင် သုံးတဲ့အခါမှာ သတိထားနေရပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း မှတ်ထားရမှာတစ်ခုကတော့ Huawei P30 Pro 2x zoom ဟာ Galaxy S10 Plus ထက် သာလွန်နေတယ်လို့ မပြောပါဘူး။ 2x zoom က ဒီဂျစ်တယ်ဖြစ်ပြီး Galaxy S10 မှာ 2x optical zoom ကို telephoto lens နဲ့ တွဲဖက်ထားပါတယ်။
Huawei P30 Pro ရဲ့ 10x hybrid zoom အထိ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကတော့ optical နဲ့ digital zoom ကို ပေါင်းစပ်ထားလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Hybrid zoom ကတော့ optical zoom လောက်တောင် အားမရချင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း digital zoom ကို ပိုအားဖြည့်ပေးသလိုတော့ ဖြစ်ပါတယ်။ P30 Pro ကတော့ 50x digital zoom အထိ ရနေပါတယ်။
2. Night mode: အမှောင်ထဲမှာတောင် ပြတ်သားနေမယ့်
Galaxy S10 Plus ဟာ ကင်မရာထဲမှာ night mode မရှိပေမယ့်လည်း artificial intelligence အသုံးပြုပြီးတော့ ဓါတ်ပုံအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် Galaxy S10 ဖုန်းတွေမှာ Scene Optimizer software လေးထည့်သွင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ “Bright Night Mode” icon လေးပေါ်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ (လပုံစံလေး) အလင်းအခြေအနေကို မှန်ကန်အောင် ထားပေးလိုက်ပါ။ ဒီကောင်လေးတက်လာဖို့တောင် အတော်လေးကြိုးစားလိုက်ရပါတယ်။ effects ကလည်း မပါသလောက်ပါပဲ။
P30 Pro ရဲ့ night mode ကတော့ အလင်းအခြေအနေနည်းပါးတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာ အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် standalone feature လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးချယ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ငါးစက္ကန့်လောက်တော့အချိန်ယူပြီးမှ ရိုက်ချက်တစ်ခုကို ရမှာပါ။ ရလဒ်ကတော့ သိသာထင်ရှားပါတယ်။ Huawei ရဲ့ night mode feature လေးတွေကို စမ်းသပ်ပေးထားပါတယ်။
အားအမြန်သွင်းစနစ်ကတော့ များသောအားဖြင့် လျစ်လျူရှုခံရပါတယ်။ အားသွင်းချိန်နည်းနည်းလေးနဲ့ ဘတ်ထရီပမာဏများများကို ပေးစွမ်းနိုင်တာတော့ ထည့်စဉ်းစားရပါလိမ့်မယ်။ အားသွင်းဖို့နာရီနည်းနည်းပဲရတယ်ဆိုရင် မိနစ်တိုင်းက အရေးပါနေမှာပါ။
ဘတ်ထရီစမ်းသပ်ချက်တွေကို မလုပ်ရသးတာမို့ ဘယ်လောက်ကွာလဲဆိုတာတော့ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် P30 Pro က 40-watt fast charging ၊ Galaxy S10 Plus က 15-watt fast charging ပဲဆိုတော့ ကွာနေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘူးထဲမှာပါတဲ့အားသွင်းတုံးနဲ့မှ ဒီကောင်တွေခံစားလို့ရမှာဆိုတော့လည်း နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားစရာပါပဲ။
OnePlus 6T McLaren Edition မှာ 40-watt fast charge ၊ Oppo R17Pro မှာ 50-watt fast charge တို့အထိ ပေးနေကြပါတယ်။ နောက်ပြီး Xiaomi က 100 watts ထိပေးထားတာဆိုတော့ Galaxy Note9လိုဖုန်းမျိုးကို ၁၇မိနစ်နဲ့ အားအပြည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
4. Dual recording: ကင်မရာနှစ်လုံးနဲ့ ဗွီဒီယိုတစ်ခု ရိုက်ကူးနိုင်ခြင်း
Galaxy S10 Plus နဲ့ Huawei P30 Pro တို့မှာ အနောက်ဘက်ကင်မရာတွေ များတယ်ဆိုပေမယ့်လည်း 10 Plus ကတော့ တစ်ချိန်တည်းမှာ နှစ်ခုမသုံးပေးနိုင်ပါဘူး။ Huawei P30 Pro ကတော့ ရပါတယ်။
Samsung ကတော့ lens သုံးခုကို တစ်ခုချင်းအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပါတယ်။ Huawei မှာလည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် P30 Pro ကတာ့ တစ်ချိန်တည်းမှာ ရှုထောင့်နှစ်ခုကနေ ရိုက်ကူးလို့ရပါတယ်။ တစ်ခုက နောက်တစ်ခုထက် Zoom ဆွဲလို့ရတဲ့သဘောပေ့ါ။
UI နဲ့ brand အသားပေးမှု
Android နဲ့ iPhone ကွဲနေသလိုပဲ Samsung လား၊ Huawei လားဆိုတာလည်း စိတ်ခံစားချက်အလိုက် ကွဲလွဲနေတတ်ပါတယ်။ Huawei ကတော့ iPhone လိုမျိုးခံဏားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Samsung ကတော့ Android စံနှုန်းအတိုင်း အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
P30 Pro ကို review မလုပ်ရသေးပေမယ့်လည်း သတိပြုရမှာက ယူအက်စ်မှာမ၀င်ပါဘူး။ P30 Pro ဟာ Samsung ပိုင်ရှင်တွေ ပြောင်းလဲစဉ်းစားလို့ရတဲ့အချက်အလက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာတော့ လက်ခံရမှာပါ။
ဒါကတော့ အပေါ်ယံပြောထားတာဖြစ်လို့ review ကြည့်ပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တာပိုကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
Samsung ထကျ Huawei ရဲ့ flagship လေးက ဘာကွောငျ့ ပိုကောငျးနရေသလဲ။
Galaxy S10 Plus ကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့လတှမှော ဖုနျးကိုငျဆောငျသူတှရေဲ့အာရုံကို အတျောလေးဖမျးစားနိုငျခဲ့ပါတယျ။ ဖမျးစားရခွငျးရဲ့ အကွောငျးရငျးတှလေညျး ရှိနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး Huawei P30 Pro ရောကျရှိလာခြိနျမှာတော့ ဒါတှအေားလုံးကို လုယူသှားခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဖုနျးနှဈခုလုံးမှာ တူညီနတေဲ့ feature လေးတှတေော့ ရှိနပေါတယျ။ IP68 certification ၊ ကွိုးမဲ့အားသှငျးစနဈ၊ reversible charging ၊ Android Pie ၊ octa-core processor ၊ ကငျမရာစုစုပေါငျးငါးလုံး ၊ OLED screen အကှေးနဲ့ သတ်ထုဖရိနျ စတာတှေ တူညီပါတယျ။
တူညီနတောတှရှေိနတေယျဆိုပမေယျ့လညျး တဈလုံးနဲ့တဈလုံးကတော့ ခွားနားပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့တော့ Huawei P30 Pro က ပိုကောငျးပါတယျ။ P30 Pro ကို အပွညျ့အဝမစမျးသပျရသေးဘူးဆိုပမေယျ့လညျး hands-on လုပျကွညျ့ရသလောကျကတော့ ဒီလိုပဲအဖွထှေကျပါတယျ။
P30 Pro ဘာကွောငျ့သာနရေသလဲ ကြှနျတျောတို့ ကွညျ့လိုကျရအောငျ။
1. 5x optical zoom: လိုခငျြသလောကျနီးပါး ရလာတယျ
Galaxy S10 Plus ဟာ Pixel3XL လိုပဲ ဈေးကှကျထဲမှာ အကောငျးဆုံးကငျမရာဖုနျးတဈလုံး ဖွဈလာခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ ကြောပွငျမှာ ကငျမရာသုံးလုံးနဲ့ အရှမှေ့ာ နှဈလုံးတပျဆငျထားပါတယျ။ Huawei ကတော့ အနောကျဘကျမှာ လေးလုံးတပျထားပွီးတော့ အရှမှေ့ာတဈလုံးပဲ ထညျ့ပေးထားပါတယျ။
Galaxy S10 Plus ထကျ သာလှနျနတေဲ့ Huawei P30 Pro ရဲ့ အားသာခကျြကတော့ 8-megapixel ကငျမရာလေးကနေ 5x optical zoom ရိုကျကူးနိုငျခွငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ Galaxy S10 Plus ဟာ 2x optical ပဲရပွီး Pixel3XL ကတော့ optical zoom feature ကို မပါတာပါ။
optical zoom ငါးဆဖွဈတာမို့ အနီးကပျရိုကျခကျြတှကေို ရိုကျကူးစနေိုငျသလို digital zoom ထကျလညျး ရှငျးလငျးပွတျသားမှုရစပေါတယျ။ digital zoomဆိုရငျ သုံးတဲ့အခါမှာ သတိထားနရေပါတယျ။
ဒါပမေယျ့လညျး မှတျထားရမှာတဈခုကတော့ Huawei P30 Pro 2x zoom ဟာ Galaxy S10 Plus ထကျ သာလှနျနတေယျလို့ မပွောပါဘူး။ 2x zoom က ဒီဂဈြတယျဖွဈပွီး Galaxy S10 မှာ 2x optical zoom ကို telephoto lens နဲ့ တှဲဖကျထားပါတယျ။
Huawei P30 Pro ရဲ့ 10x hybrid zoom အထိ လုပျဆောငျနိုငျခွငျးကတော့ optical နဲ့ digital zoom ကို ပေါငျးစပျထားလို့ဖွဈပါတယျ။ Hybrid zoom ကတော့ optical zoom လောကျတောငျ အားမရခငျြပါဘူး။ ဒါပမေယျ့လညျး digital zoom ကို ပိုအားဖွညျ့ပေးသလိုတော့ ဖွဈပါတယျ။ P30 Pro ကတော့ 50x digital zoom အထိ ရနပေါတယျ။
2. Night mode: အမှောငျထဲမှာတောငျ ပွတျသားနမေယျ့
Galaxy S10 Plus ဟာ ကငျမရာထဲမှာ night mode မရှိပမေယျ့လညျး artificial intelligence အသုံးပွုပွီးတော့ ဓါတျပုံအရညျအသှေးကို မွှငျ့တငျပေးထားပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရပျတှကွေောငျ့ Galaxy S10 ဖုနျးတှမှော Scene Optimizer software လေးထညျ့သှငျးပေးတာဖွဈပါတယျ။ “Bright Night Mode” icon လေးပျေါစခေငျြတယျဆိုရငျတော့ (လပုံစံလေး) အလငျးအခွအေနကေို မှနျကနျအောငျ ထားပေးလိုကျပါ။ ဒီကောငျလေးတကျလာဖို့တောငျ အတျောလေးကွိုးစားလိုကျရပါတယျ။ effects ကလညျး မပါသလောကျပါပဲ။
P30 Pro ရဲ့ night mode ကတော့ အလငျးအခွအေနနေညျးပါးတဲ့အခြိနျမြိုးတှမှော အသုံးပွုနိုငျစမေယျ့ standalone feature လေးတဈခုဖွဈပါတယျ။ ရှေးခယျြလိုကျမယျဆိုရငျ ငါးစက်ကနျ့လောကျတော့အခြိနျယူပွီးမှ ရိုကျခကျြတဈခုကို ရမှာပါ။ ရလဒျကတော့ သိသာထငျရှားပါတယျ။ Huawei ရဲ့ night mode feature လေးတှကေို စမျးသပျပေးထားပါတယျ။
အားအမွနျသှငျးစနဈကတော့ မြားသောအားဖွငျ့ လဈြလြူရှုခံရပါတယျ။ အားသှငျးခြိနျနညျးနညျးလေးနဲ့ ဘတျထရီပမာဏမြားမြားကို ပေးစှမျးနိုငျတာတော့ ထညျ့စဉျးစားရပါလိမျ့မယျ။ အားသှငျးဖို့နာရီနညျးနညျးပဲရတယျဆိုရငျ မိနဈတိုငျးက အရေးပါနမှောပါ။
ဘတျထရီစမျးသပျခကျြတှကေို မလုပျရသးတာမို့ ဘယျလောကျကှာလဲဆိုတာတော့ မပွောနိုငျသေးပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ P30 Pro က 40-watt fast charging ၊ Galaxy S10 Plus က 15-watt fast charging ပဲဆိုတော့ ကှာနတောကိုမွငျရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဘူးထဲမှာပါတဲ့အားသှငျးတုံးနဲ့မှ ဒီကောငျတှခေံစားလို့ရမှာဆိုတော့လညျး နညျးနညျးတော့ စဉျးစားစရာပါပဲ။
OnePlus 6T McLaren Edition မှာ 40-watt fast charge ၊ Oppo R17Pro မှာ 50-watt fast charge တို့အထိ ပေးနကွေပါတယျ။ နောကျပွီး Xiaomi က 100 watts ထိပေးထားတာဆိုတော့ Galaxy Note9လိုဖုနျးမြိုးကို ၁၇မိနဈနဲ့ အားအပွညျ့သှငျးနိုငျပါတယျ။
4. Dual recording: ကငျမရာနှဈလုံးနဲ့ ဗှီဒီယိုတဈခု ရိုကျကူးနိုငျခွငျး
Galaxy S10 Plus နဲ့ Huawei P30 Pro တို့မှာ အနောကျဘကျကငျမရာတှေ မြားတယျဆိုပမေယျ့လညျး 10 Plus ကတော့ တဈခြိနျတညျးမှာ နှဈခုမသုံးပေးနိုငျပါဘူး။ Huawei P30 Pro ကတော့ ရပါတယျ။
Samsung ကတော့ lens သုံးခုကို တဈခုခငျြးအသုံးပွုခှငျ့ပေးထားပါတယျ။ Huawei မှာလညျး လုပျလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ P30 Pro ကတာ့ တဈခြိနျတညျးမှာ ရှုထောငျ့နှဈခုကနေ ရိုကျကူးလို့ရပါတယျ။ တဈခုက နောကျတဈခုထကျ Zoom ဆှဲလို့ရတဲ့သဘောပေ့ါ။
UI နဲ့ brand အသားပေးမှု
Android နဲ့ iPhone ကှဲနသေလိုပဲ Samsung လား၊ Huawei လားဆိုတာလညျး စိတျခံစားခကျြအလိုကျ ကှဲလှဲနတေတျပါတယျ။ Huawei ကတော့ iPhone လိုမြိုးခံဏားခကျြကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ Samsung ကတော့ Android စံနှုနျးအတိုငျး အသုံးပွုနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
P30 Pro ကို review မလုပျရသေးပမေယျ့လညျး သတိပွုရမှာက ယူအကျဈမှာမဝငျပါဘူး။ P30 Pro ဟာ Samsung ပိုငျရှငျတှေ ပွောငျးလဲစဉျးစားလို့ရတဲ့အခကျြအလကျတှရှေိနတေယျဆိုတာတော့ လကျခံရမှာပါ။
ဒါကတော့ အပျေါယံပွောထားတာဖွဈလို့ review ကွညျ့ပွီးမှ ဆုံးဖွတျတာပိုကောငျးတယျလို့ ပွောခငျြပါတယျ။
Previous articleiOS ဘယ်ဗားရှင်းက ဘတ်ထရီသက်တမ်းအခံဆုံးလဲသိလား
Next articleApple ကို ဂျင်း အကြီးကြီး ထည့်ခဲ့တဲ့ တရုတ် လူငယ် နှစ်ယောက်